Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikumi 03, 2021
Vatongi vatanhatu vatsva vedare reSupreme Court vatoreswa mhiko nhasi kuitira kuti vatange kunzwa nhasi nyaya yaVaLuke Malaba yekuzvidza dare mushure mekunge vamanikidzwa nedare repamusoro kuenda kumudyandigere izvo zviri kupikiswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoparura zviri pamutemo chirongwa cheBulawayo Arts Festival.
Vezvematongerwo enyika votaura pamusoro pekurudziro iri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo yekuti vechidiki vanyorese kuvhota pamberi pesarudzo dza2023, uye kuti zvakakoshereyi kuti vechidiki ava vanyorese kuvhota.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance, VaTendai Biti, avo vakambove gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa, vanoti mutemo mutsva wehurumende wekutara mitengo yezvinhu unoratidza kuti yakundikana kugadzirisa hupfumi hwenyika.
Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabata nechirwere ichi munyika pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi matatu nemumwe chete, 39 031.
Vakaremara vanoti havasi kufara nekusavepo kwemitemo inochengeta kodzero dzavo pamabasa.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munguva ino yehirwere cheCovid-19.